Nilaza ny filohan’ny Repoblika tamin’ny fiarabahan’ny fianakaviamben’ny fampahalalam-baovao azy noho ny taona vaovao fa hisy ny fihaonany isam-bolana amin’ny mpanao gazety. Isaky ny alahady faran’ny volana izany. Tsy anavahana mpanao gazety ny fihaonana sy ny adihevitra ho fampahafantarana ny vahoaka ny zava-misy.
Nambarany ihany koa fa herintaona, ny 24 janoary, ny governemanta. Eo am-panaovana tombana ny mpikamban’ny governemanta tsirairay izy sy ny praiminisitra. Aorian’izay, tsy maintsy hisy ny fanamboarana ny governemanta: soloina izay minisitra tsy mahatratra ny tanjona napetraka, araka ny fifanarahana fandaharanasa.
Nanao fianianana ireo mpikamban’ny Fitsarana avo (HCJ) enina farany. Nambaran’ny tonia mpampanoa lalàna eo anivon’ny Fitsarana tampony fa 15 ny fitoriana voarain’ny HCJ hatramin’ny 2019. Minisitra teo aloha avokoa ireo torina. Efa nalefa eny anivon’ny Antenimierampirenena ny antontan-taratasy 12 amin’izany.
Faha-158 amin’ny firenena 180 i Madagasikara, nahazo isa 24/100, amin’ny tsy fisian’ny kolikoly, taona 2019, araka ny tatitry ny Transparency International. Nihemotra izany fa faha-152 amin’ny firenena 180 ny taona 2018, ary nahazo isa 25/100. Anton’izany ny tsy fisian’ny fangaraharan’ny fampiasam-bola tamin’ny fifidianana.
Nanaovana fanadihadiana ny tale jeneraly teo aloha ny orinasam-panjakana Kraomita malagasy (Kraoma), taorian’ny fanadihadiana ny taom-piasana 2018. Anton’izany ny fisian’ny halatra vokatra 34 000 taonina, ohatra, ny fanondranam-bokatra nisy hosoka, ny kiantranoantrano, ny trosa 101 miliara Ar tsy mazava…
Ampolony ny namoy ny ainy, analiny ny traboina.. Izay ny vokatry ny andro ratsy, nitondra orana nandritra ny andro maromaro. Eo koa ny olona tsy hita popoka, ny tanàna tondra-drano, ny lalana tapaka, ny voly simba… Anisan’ny voa mafy amin’izany ny faritra Boeny, ny faritra Sofia, ny faritra Alaotra Mangoro.
Mbola mifamahofaho ny toe-draharaham-pirenena? Eo, ohatra, ny hanamboarana ny governemanta, ny fiatrehana ny voka-dratsin’ny andro ratsy…